Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Lebanon » Lebanon gbara ọchịchịrị mgbe ọkụ eletrik zuru oke gasịrị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lebanon • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ụlọ ọrụ ọkụ eletrik abụọ gwụrụ n'ihi na gọọmentị enweghị ego mba ofesi iji kwụọ ndị na -ebunye ọkụ ọkụ mba ọzọ ụgwọ. A kọrọ na ụgbọ mmiri na -ebu mmanụ na gas jụrụ ịbanye na Lebanon ruo mgbe a kwụrụ ụgwọ maka mbufe ha na dollar US.
Ọnọdụ ọkụ eletrik adịlarị njọ na Lebanon tupu mgbanyụ ọkụ zuru oke.
Ndị ọchịchị ga -anwa iji mmanụ mmanụ nke ndị agha ka ụlọ ọrụ ike wee maliteghachi ọrụ nwa oge.
Dabere na isi mmalite gọọmentị, ọkụ eletrik na Lebanon nwere ike ịdịru “ọtụtụ ụbọchị”.
Lebanon na -eche oke ọkụ eletrik ihu mgbe a manyere ụlọ ọrụ ọkụ eletrik abụọ kachasị ukwuu na mba ahụ imechi taa, n'ihi oke mmanụ ọkụ.
Dị ka ndị ọrụ Lebanọn si kwuo, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbanyụcha ọkụ na mba nsogbu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde isii na-atụ anya ga-aga n'ihu 'ụbọchị ole na ole'.
Ụlọ ọrụ ọkụ eletrik Deir Ammar na Zahrani emetụtala na -enye 40% ọkụ eletrik nke Lebanon, dị ka onye ọrụ ha si kwuo, Electricité Du Liban.
"Netwọk ọkụ Lebanọn kwụsịrị ịrụ ọrụ n'etiti ehihie taa, ọ yighị ka ọ ga -arụ ọrụ ruo Mọnde na -esote, ma ọ bụ ruo ọtụtụ ụbọchị," onye ọrụ ahụ kwuru.
Ndị ọchịchị gọọmentị Lebanọn ga -anwa iji mmanụ mmanụ nke ndị agha ka ụlọ ọrụ ike wee maliteghachi ọrụ nwa oge, mana dọọ aka na ntị na ọ gaghị eme n'oge adịghị anya.
Ụlọ ọrụ ọkụ eletrik abụọ gwụrụ n'ihi na gọọmentị enweghị ego mba ofesi iji kwụọ ndị na -ebunye ọkụ ọkụ mba ọzọ ụgwọ. A kọrọ na ụgbọ mmiri bu mmanụ na gas jụrụ ịbata Lebanon ruo mgbe ejirila dollar US kwụọ ụgwọ maka mbufe ha.
Paụnd Lebanon adaala 90% kemgbe 2019, n'etiti nsogbu akụ na ụba, nke nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na -agbadawanye. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị enwebeghị ike iguzobe gọọmentị n'ime ọnwa iri na atọ kemgbe ogbunigwe gbawara n'ọdụ ụgbọ mmiri Beirut, na -achọtakarị ihe ndị mmadụ nwekọrọ ọnụ ka akwadochara kabinet ọhụrụ n'ọnwa Septemba.
Ọnọdụ ọkụ eletrik adịla njọ na mba ahụ tupu mgbachapụ kpamkpam, ebe ndị bi na-enweta ọkụ eletrik naanị naanị awa abụọ n'ụbọchị.
Ụfọdụ ndị bi ebe ahụ na -adabere na igwe na -emepụta mmanụ ala iji nye ụlọ ha ọkụ, mana akụrụngwa dị ụkọ dị na mba a.